Mmoa a wɔn ho tew ne mmoa a wɔn ho ntew (1-47)
11 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: 2 “Monka nkyerɛ Israelfo sɛ, ‘Asaase so mmoa nyinaa, nea mubetumi awe ni:+ 3 Mubetumi awe aboa biara a ne nan mu apae abien na opuw wesaw. 4 “‘Mmoa a wopuw wesaw anaa wɔn nan mu apae abien a ɛnsɛ sɛ mowe ni: Monnwe yoma, efisɛ opuw wesaw de, nanso ne nan mu mpaee abien. Ne ho ntew mma mo.+ 5 Afei nso, monnwe okukuban,+ efisɛ opuw wesaw de, nanso ne nan mu mpaee abien. Ne ho ntew mma mo. 6 Monnwe adanko nso, efisɛ opuw wesaw de, nanso ne nan mu mpaee abien. Ne ho ntew mma mo. 7 Bio nso, monnwe prako,+ efisɛ ne nan mu apae abien de, nanso ompuw nwesaw. Ne ho ntew mma mo. 8 Monnwe wɔn nam, na munnso wɔn afunu mu nso. Wɔn ho ntew mma mo.+ 9 “‘Nsu mu mmoa a mubetumi awe ni: Asubɔnten anaa ɛpo mu aboa biara a ntɛtɛw ne abona wɔ ne ho no, mubetumi awe.+ 10 Nanso ɛpo anaa asubɔnten biara mu mmoa nketenkete* anaa nsu mu mmoa* a wonni ntɛtɛw ne abona de, ɛyɛ mo akyiwade. 11 Ɛsɛ sɛ ɛyɛ mo akyiwade koraa. Monnwe bi,+ na wɔn afunu nso, munkyi. 12 Biribiara a ɛwɔ nsu mu a enni ntɛtɛw ne abona yɛ mo akyiwade. 13 “‘Mmoa a wotu a ɛsɛ sɛ mukyi ni; monnwe wɔn nam, efisɛ wɔyɛ akyiwade: Ɔkɔre,+ ɔkɔrebia, opete tuntum,+ 14 ɔkompete, ɔkom ahorow nyinaa bi, 15 kwaakwaadabi ahorow nyinaa bi, 16 sohori, ɔpatu, asomfena, akorɔma ahorow nyinaa bi, 17 ɔpatu ketewa, ɛpo so anene, ɔpatu asotenten, 18 suborɔkokɔ, nsu so dabodabo, opete, 19 asukɔnkɔn, asunoma ahorow nyinaa bi, asuakwaa, ne ampan. 20 Mmoa nketenkete* a wotu na wɔwɔ nan anan nyinaa yɛ mo akyiwade. 21 “‘Mmoa nketenkete a wotu na wɔwɔ nan anan yi na mubetumi awe; wɔn a wɔwɔ nan a wotumi de huruhuruw. 22 Wɔn mu nea mubetumi awe ni: Ntutummɛ ahorow a wotumi tu ne ntutummɛ foforo a nnipa di, aketekre, ne mmebɛw.+ 23 Mmoa nketenkete foforo a wotu na wɔwɔ nan anan a aka nyinaa yɛ mo akyiwade. 24 Eyinom ne nneɛma a ebegu mo ho fĩ. Obiara a obeso wɔn afunu mu no, ne ho rentew kosi anwummere.+ 25 Na obiara a ɔbɛma wɔn afunu so no, ɛsɛ sɛ ɔhoro n’ataade;+ ne ho rentew kosi anwummere. 26 “‘Sɛ aboa bi nan mu apae abien nanso ɛmpae nsii, na sɛ ompuw nwesaw a, ɛyɛ mo akyiwade. Obiara a obeso ne mu no ho begu fĩ.+ 27 Mmoa a wɔwɔ nansoaa* a wɔnantew wɔn nan anan so no ho ntew mma mo. Obiara a obeso wɔn afunu mu no, ne ho rentew kosi anwummere. 28 Obiara a ɔbɛma wɔn afunu so no, ɛsɛ sɛ ɔhoro n’ataade,+ na ne ho rentew kosi anwummere,+ efisɛ wɔn ho ntew mma mo. 29 “‘Mmoa a wɔwea fam a wɔn ho ntew ni: Ahweaa, akura,+ nketew ahorow nyinaa bi, 30 ɔdannena, ɔmampam, bɔmɔte, anwea-ketew, ne ɔbosomaketew. 31 Saa mmoa a wɔwea fam yi ho ntew mma mo.+ Obiara a obeso wɔn afunu mu no, ne ho rentew kosi anwummere.+ 32 “‘Biribiara a wɔn mu biara bewu atɔ so no ho rentew, sɛ ɛyɛ nea wɔde dua asen oo, ataade oo, aboa nhoma oo, awerɛhow ntama* oo, ɛho rentew. Ade biara a wɔde yɛ adwuma a wɔn funu bɛka no, ɛsɛ sɛ wɔde hyɛ nsu mu, na ɛho rentew kosi anwummere; anwummere na ɛho bɛtew. 33 Sɛ wɔn mu bi funu tɔ kuku mu a, ɛsɛ sɛ mobɔ kuku no, na biribiara a ɛwɔ mu no nso ho rentew.+ 34 Nsu a ɛwɔ saa kuku no mu no, sɛ ɛka aduan biara a, ɛho rentew, na biribiara a wɔnom a ɛwɔ saa kuku no mu nso ho rentew. 35 Biribiara a wɔn funu bɛtɔ so no ho rentew. Sɛ ɛyɛ fononoo oo, ɛyɛ nea wɔde kuku si so oo, ɛsɛ sɛ wɔbɔ no. Ɛho agu fĩ, na ɛho rentew mma mo. 36 Sɛ wɔtɔ nsuti anaa abura a nsu wom mu de a, ɛho bɛkɔ so atew, nanso nea obeso wɔn funu mu no ho begu fĩ. 37 Sɛ wɔn funu tɔ aba bi a wɔrebedua so a, ɛho tew. 38 Nanso sɛ wɔde nsu gu aba no so na aboa a wawu no fã bi tɔ so a, ɛho rentew mma mo. 39 “‘Sɛ mmoa a mutumi we no bi wu a, obiara a obeso ne funu mu no, ne ho rentew kosi anwummere.+ 40 Obiara a ɔbɛwe aboa a wawu no fã biara no, ɛsɛ sɛ ɔhoro n’ataade, na ne ho rentew kosi anwummere.+ Na obiara a ɔbɛma ne funu so no, ɛsɛ sɛ ɔhoro n’ataade, na ne ho rentew kosi anwummere. 41 Mmoa nketenkete a wɔn ho ntew nyinaa yɛ akyiwade.+ Ɛnsɛ sɛ mowe. 42 Ɛnsɛ sɛ mowe aboa biara a ɔwea ne yafunu so, nea ɔwɔ nansoaa a ɔnantew ne nan anan so, anaa aboa biara a ɔwɔ nan bebree a ɔwea fam, efisɛ ɛyɛ akyiwade.+ 43 Mommfa mmoa a wɔwea fam yi nnsɛe mo ho,* na mommfa nngu mo ho fĩ, anyɛ saa a mo ho rentew.+ 44 Mene Yehowa mo Nyankopɔn;+ montew mo ho na monyɛ kronkron,+ efisɛ meyɛ kronkron.+ Enti mommfa mmoa a wɔwea fam nngu mo* ho fĩ. 45 Mene Yehowa a ɔredi mo anim afi Egypt asaase so de akyerɛ sɛ meyɛ mo Nyankopɔn no.+ Monyɛ kronkron,+ efisɛ meyɛ kronkron.+ 46 “‘Eyi ne mmara a ɛfa mmoa nyinaa ho, mmoa a wotu, mmoa* a wɔwɔ nsu mu, ne mmoa* a wɔwea fam nyinaa. 47 Eyi bɛma nsonsonoe abɛda nea ɛho tew ne nea ɛho ntew ntam, ne aboa a mubetumi awe ne nea morentumi nwe ntam.’”+
^ Anaa “Ntuboa.”
^ Mmoa no bi ne gyata, osisi, ne pataku.